काम गर्दा तपाईँको ल्यापटप धेरै ह्याङ्ग हुने गर्दछ ? त्यसोभए यसरी समस्याबाट छुटकारा पाउनुस् - Technology Khabar
» काम गर्दा तपाईँको ल्यापटप धेरै ह्याङ्ग हुने गर्दछ ? त्यसोभए यसरी समस्याबाट छुटकारा पाउनुस्
कोरोना भाइरस महामारीको कारण कम्पनीहरूले उनीहरूका कामदारहरूलाई घरबाटै कामका लागि लगाइरहेका छन्। धेरै व्यक्तिहरू घरबाट काम गरिरहेको समयमा बित्तिकै कम्प्युटर ह्याङ्ग वा ढिलो हुने जस्ता समस्याहरूको सामना गर्दैछन्।
तर विन्डो अपडेट, र्याम अपग्रेड र रिस्टार्ट केहि तरिकाहरू हुन् जसका माध्यमबाट तपाईं यी समस्याहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ।
किन यो रिस्टार्ट गर्नु महत्वपूर्ण छ
धेरै प्रयोगकर्ताहरू धेरै दिनको लागि आफ्नो ल्यापटप रिस्टार्ट गर्दैनन्। विन्डोज १० मा, कम्प्युटर स्वचालितरूपमा स्लीप मोडमा जान्छ, तर तपाईंले बन्द नगर्नुभएका कार्यहरू(Task), पृष्ठभूमिमा भने चलिरहेका हुन्छन्। यस्तो निरन्तर लामो समयसम्म हुँदा ल्यापटप ढिलो संचालन हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको काम समाप्त भएपछि प्रत्येक दिन ल्यापटप अफ गर्नुहोस्। यस तरीकाले पृष्ठभूमिमा चलिरहेका सबै कार्यहरू बन्द हुनेछन्।
अपडेटहरु नियमित डाउनलोड गर्नुहोस्
कुनै पनि अपरेटिङ्ग प्रणालीमा कुनै न कुनै समस्या हुन्छ। यी समस्याहरू पार गर्न, अपरेटिङ्ग प्रणाली प्रदान गर्ने कम्पनीले अपडेटहरू जारी गर्दछ। यी अद्यावधिकहरू मार्फत, अपरेटिङ्ग प्रणालीमा आईरहेका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। त्यसैले तपाईँलाई प्रणाली अप टु डेट राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विन्डोज १० मा अपडेट जाँचको लागि, तपाईं सेटिङ्गसमा जानुहोस् र अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँले पछिल्लो अद्यावधिकहरू Check for Updates मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोग नगरिएका एप्स डिलिट गर्नुस्
तपाईँको कम्प्यूटर ल्यापटपमा त्यहाँ धेरै एप्स हुन्छन्। कम्पनीहरूले नयाँ ल्यापटपको साथ धेरै एप्स प्रदान गर्दछ जसलाई ब्लोटवेयर Bloatware भनिन्छ। यदि तपाईंको कम्प्युटर वा ल्यापटपमा त्यस्ता एपहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तिनीहरूलाई डिलिट गर्नुहोस्। विन्डोज १० मा, तपाईं कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् र प्रोग्राम चयन गर्नुहोस् र तपाईंले मेटाउन चाहानु भएको एपमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा, तपाईंले इन्स्टल क्यान्सिल गर्ने विकल्प पाउनुहुनेछ।
र्याम अपग्रेड गर्नुहोस्
र्याम बढाउँदा ल्यापटपको गतिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ। मध्यमस्तरका बजेट अन्तर्गत धेरै ल्यापटप केवल ४ जीबी र्यामको साथ आउँदछन्। यदि तपाईँले मल्टीटास्किंग गर्नुछ भने ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हुने ४ जीबी र्याम पर्याप्त हुँदैन। त्यसकारण तपाईँको लागि र्याम अपग्रेड गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अधिक कम्पनीहरूले ल्यापटपमा दुई र्याम स्लटहरू दिएका हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको स्पीड बढाउनका लागि अर्को ४जीबी वा ८ जीबीको र्याम दोस्रो स्लटमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ।
एसएसडी प्रयोग गर्नुहोस्
एसएसडी (सोलिड स्टेट ड्राइभ्स) नयाँ प्रकारको स्टोरेज डिभाइस हो जुन फ्ल्यास मेमोरीमा आधारित भएर कार्य गर्दछ। एसएसडीमा प्रयोग गरिएको फ्ल्यास मेमोरी टेक्नोलोजीको माध्यमबाट डाटा पहिल्यै चलिरहेको एचडीडी भन्दा कम समयमा नै एक्सेस गर्न सकिन्छ। बजारमा एसएसडीको मूल्य एचडीडीको भन्दा धेरै बढी छ, तर तपाईंले अपरेटिङ्ग सिस्टम ड्राइभ लागि मात्र एसएसडी प्रयोग गरेर ल्यापटपको गति बढाउन सक्नुहुनेछ। डाटा स्टोरेज गर्न, तपाईं एचडीडीलाई एक विकल्पको रूपमा मात्र राख्न सक्नुहुन्छ।
सिस्टम मर्मत उपयोग गर्नुहोस्
विण्डो १० मा, प्रणाली मर्मतको लागि र ल्यापटपको गति कायम राख्नका लागि सिस्टम मर्मत (System Maintenance) को विकल्प दिइएकोछ। प्रणाली मर्मतको माध्यमबाट, तपाईंले ल्यापटपको कुनै पनि भागले सामना गरेको समस्या पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अतिरिक्त सिस्टम मर्मत कम्प्युटरबाट भाइरस हटाउनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।